Indlela yokuhambisa ubugcisa bokugqibela kumthengi ngokuchanekileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Amaqhinga, Tutorials
Indlela yokuhambisa ubugcisa bokugqibela kumthengi ngokuchanekileyo ihlala ilidabi kuye nawuphi na umyili / umculi. Ngamaxesha amaninzi sidla ngokuba neempazamo oko kusenza siphambane kungoko kufuneka ukuba noluhlu lwee amanqaku aphambili xa usenza oku. Uhambisa njani i-artwork yokugqibela kumthengi okanye, ukusilela oko, kwinkampani yokushicilela ngohlobo lokuba sifumane umsebenzi ukuba uphume uthembekile kuyilo lwethu lwedijithali.
Funda ukusebenza nomthengi ngohlobo lokuba bobabini banxibelelane ngokuchanekileyo, bazi imiba esisiseko Kuyimfuneko ukuba ungenise uyilo ukuze uprinte, wenze uluhlu lwalo jonga iimpazamo ezinokwenzeka kwaye ndikwazi ukuyilungisa kwangexesha. Kancinci iimpazamo ziya kuncipha kunye nesingqisho somsebenzi siya kuba lulwelo ngakumbi xa silungisa iimpazamo kwiprojekthi nganye yegraphic.
Into yokuqala ekufuneka siyazi xa singena kwiprojekthi yemizobo kukucaca kwasekuqaleni ukuba umxhasi akangomyiliKe ngoko, kufuneka siyiphathe ngendlela efanelekileyo kuyo, kuthintelwe ukusebenzisa ubuchwepheshe obuninzi kakhulu.
Qonda loo nto umthengi akayazi yoyilo kwaye ayinazo iinkqubo zobungcali yenye yeengongoma ezisisiseko ekufuneka siziqonde kuqala.
Umxhasi akazi malunga neefomathi, nokuba akukho sithuba sombala, okanye iinkqubo, ngenxa yeso sizathu xa sithumela ifayile kuyacetyiswa ukuba siyenze iifomathi ezifundekayo ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwesidingo sokuba nayiphi na inkqubo efakiweyo, ifomathi elungileyo yifayile ye- JPEG. Olu qhakamshelwano lokuqala lusinceda ukuba thumela izindululo ezingekagqitywa, Ngeso sizathu singakuthumela uyilo kwiJPEG.
Kwelinye icala sinayo shicilela, kulapho Singathetha ngeefomathi, inkxaso, iinkqubo kunye nazo zonke iintlobo zobugcisa kuba ziingcali zobugcisa bokuzoba njengokuba. Xa sithumela ubugcisa bokugqibela kwinkampani yokushicilela kufuneka uphonononge inani lezinto zobugcisa:
Guqula iifonti zenze amagophe
Isithuba sombala we-CMYK (umbala we-inki)
Jonga ubungakanani boxwebhu
Isisombululo esiphakamileyo kwimifanekiso
Ezi zinto zobugcisa zibalulekile ukufezekisa iziphumo ezilungileyo zokuprinta. kwaye ungaphambuki malunga neempazamo zomzuzu wokugqibela. Okulandelayo siza kubona ukuba singawenza njani la manyathelo akhankanywe apha ngasentla kunye neenkqubo ezithile zoyilo.
Guqula ubuchwephesha bube ngamagophe Kubalulekile ukuthintela utshintsho kuhlobo lochwetheziweyo xa siza kuthumela ubugcisa bokugqibela bokuprinta, akuqhelekanga ukufumana uhlobo olwahlukileyo kuyilo lwethu ngenxa yale mpazamo inokulungiswa ngomzuzwana. Kuba Guqula isicatshulwa sibe ziirveve en Umzekeliso Kufuneka sikhethe konke okubhaliweyo kwaye kwimenyu ephezulu cinezela ukhetho isicatshulwa / yenza ulwandlalo. Emva kokwenza oku typography yethu iya kuba ngumjikelo kwaye awuyi kuba nangxaki xa uyithumela ukuprinta, kufuneka jonga ukuba isicatshulwa sichanekile na kuba ukusishenxisela kumjikelo asisayi kuphinda sikwazi ukubhala esinye isicatshulwa.
El Imowudi yombala Yinto esisiseko kakhulu kwiprojekthi ebonakalayo, kufuneka sazi ukuba kukho iindawo ezimbini eziphambili zombala:
RGM (umbala okhanyayo / umbala wescreen)
CMYK (umbala we-inki / ushicilelo)
Ngokusekwe koku kufuneka sisebenzisane ne Imowudi yemibala ye-CMYK ukuba uyilo lwethu kufuneka lwenziwe ushicilelo kamva. Ngaba unako jonga ifomathi yoyilo kunye negazi kwangaxeshanye sikhetha imo yombala.
Akukho nto imbi kwiprojekthi yegraphic kunokubona umgangatho ongekho mgangathweni kunye nemifanekiso ye-pixelatedNgesi sizathu, kufuneka siqinisekise ukuba yonke imifanekiso yethu inomgangatho ofanelekileyo wokubathintela ekuphulukaneni nobukhali xa sele iprintiwe. Kuba khangela umgangatho womfanekiso singayenza ngaphakathi Photoshop ukuya kwimenyu ephezulu kwaye ucofe i umfanekiso / ubungakanani bomfanekiso ukhethoKweli candelo siza kubona ubungakanani bomfanekiso wethu kunye nokusonjululwa kwawo. Kungcono ukusebenza kunye Umgangatho we-300 dpi kwimifanekiso kwaye ungayihlisa iye kwi-dpi eyi-240, nangona kunjalo ingcebiso yenza uvavanyo oluprintiweyo Ukujonga ukuba yonke imifanekiso ibukhali ngokwaneleyo.
Igazi yinto esisiseko xa usenza iiprojekthi zemizobo eziza kuprintwa ephepheni kuba ukuprinta ephepheni kuthetha ukuba Inkqubo yokuqhelanisa onokuba nayo Uluhlu lwempazamo kwaye ndibangele isitya esimhlophe esimhlophe kuyilo lwethu lokugqibela, ngenxa yeso sizathu ukunqanda le mpazamo iqhelekileyo sidibanisa umda wegazi ukuyila. Eyona nto iqhelekileyo kukongeza ezinye 3mm yegazi Kumacala omabini oyilo, kodwa kuxhomekeke kwinkampani yokushicilela, eminye imilinganiselo inokucelwa. Kuya kufuneka siqwalasele olu lwazi ngokukhawuleza ukuthintela iimpazamo ezizayo.
Nokuba leliphi na igazi lethu, inkqubo ihlala ifana, kuqala yandisa umbala okanye imifanekiso ngaphandle kwefomathi yethu (ubungakanani yoyilo loyilo ngaphandle kwegazi) ukuya kuthi ga kumda wegazi, kuyacetyiswa shiya umda omncinci ngempazamo ngaphakathi kwendawo yomsebenzi wethu ukunqanda ukongeza okubhaliweyo okanye imifanekiso kwimida yefomathi yokugqibela.
Ifomathi yomfanekiso kufuneka ilungelelaniswe neemfuno zomatshini wokushicilelaKule nto kufuneka siqale sazi ukuba zeziphi iifomathi abazisebenzisayo, nje ukuba sizazi ezi datha siza kuthumela ubugcisa bokugqibela kolo hlobo lwefomathi. Kuxhomekeka kumshicileli thina Bangacela ifomathi enye okanye enye, ezinye zaziwa kakuhle zezi: PSD, AI, SVG, TIFT, PDF ... Njalo Kufuneka sikuphephe ukuthumela ubugcisa bokugqibela kwiifomathi nelahleko njengoko kunjalo ngeJPEG. Ukuba siyithumela ngenqanawa ifomathi yemveli (I-PSD, i-AI, njl.
Emva kokwenza konke oku sikulungele ukuthumela uyilo lwethu ukuprinta kwaye ndiyathemba ukuba ngekhe ndenze naziphi na iimpazamo. Ndwendwela ivenkile yokuprinta ukwazi ukuba loluphi uhlobo lweenkonzo abazinikelayo kwaye zeziphi iinkcukacha zobugcisa eziyimfuneko kubugcisa bokugqibela obuza kuthunyelwa.
Kufuneka siyicace loo nto ukuthatha uyilo ukuprinta kuhlala kungumceli mngeni Kwiprojekthi nganye entsha: utshintsho lomzuzu wokugqibela, iimpazamo, iimpazamo kubuchwephesha kunye nezinye izinto ezinokubonakala kwaye zidlale iqhinga kuthi. Ukulandela esi sikhokelo sincinci kwaye siphonononge uyilo lwethu ngaphambi kokuba sithabathe ukushicilela, siya kuba nakho ukunciphisa iimpazamo ezinokubakho.
Ezinye izithuba ezinokukunceda:
I-Pinterest: isixhobo phakathi komthengi kunye nomyili
Ungayithatha njani uyilo ukuprinta ngaphandle kokubhubha kumzamo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Indlela yokuhambisa ubugcisa bokugqibela kumthengi ngokuchanekileyo
Yenza umfanekiso wesitayile sikaAndy Warhol kunye neefoto zethu
Imigaqo esisiseko yokwenza izinto zemizobo zisebenze ngokupheleleyo